Ndị Ikpe 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Ikpe 10:1-18
10 Mgbe Abimelek nwụrụ, Tola nwa Pua nwa Dodo, onye Ịsaka biliri ịzọpụta+ Izrel, o bi na Shemia n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu.+ 2 O wee kpee Izrel ikpe ruo afọ iri abụọ na atọ, o wee nwụọ, e wee lie ya na Shemia. 3 Mgbe ọ nwụrụ, Jeya onye Gilied+ biliri, o kpekwara Izrel ikpe ruo afọ iri abụọ na abụọ. 4 O wee mụọ ụmụ ndị ikom iri atọ, bụ́ ndị na-agba ịnyịnya ibu iri atọ tojuru etoju,+ ha nwekwara obodo iri atọ. A na-akpọ ha Havọt-jeya+ ruo taa; ha dị n’ala Gilied. 5 E mesịa, Jeya nwụrụ, e wee lie ya na Kemọn. 6 Ụmụ Izrel wee malite ọzọ ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova,+ ha malitekwara ife Bel+ na ihe oyiyi Ashtọret+ na chi ndị Siria+ na chi ndị Saịdọn+ na chi ndị Moab+ na chi ụmụ Amọn+ na chi ndị Filistia.+ Ha wee hapụ Jehova, ha efeghịkwa ya.+ 7 Jehova wee weso ndị Izrel iwe dị ọkụ,+ o wee were ha resị+ ndị Filistia+ na ụmụ Amọn.+ 8 Ha wee na-echi ụmụ Izrel ọnụ n’ala, na-emegbukwa ha nke ukwuu n’afọ ahụ—ha megburu ụmụ Izrel niile bi n’ofe Jọdan n’ala ndị Amọraịt nke dị na Gilied ruo afọ iri na asatọ. 9 Ụmụ Amọn na-agafe Jọdan wee buso Juda na Benjamin na ụlọ Ifrem agha; a kpagbukwara Izrel nke ukwuu.+ 10 Ụmụ Izrel wee malite ịkpọku Jehova ka o nyere ha aka,+ sị: “Anyị emehiewo+ gị, n’ihi na anyị ahapụwo Chineke anyị wee na-efe Bel.”+ 11 Jehova wee sị ụmụ Izrel: “Ọ́ bụghị n’aka Ijipt+ na ndị Amọraịt+ na ụmụ Amọn +na ndị Filistia+ 12 na ndị Saịdọn+ na Amalek+ na Midian+ ka m zọpụtara unu mgbe ha kpagburu unu,+ unu wee tikuo m? 13 Ma unu hapụrụ m+ wee malite ife chi ọzọ.+ Ọ bụ ya mere na agaghị m azọpụta unu ọzọ.+ 14 Gaanụ kpọkuo chi ndị ahụ+ unu họọrọ+ ka ha nyere unu aka. Ka ha zọpụta unu ugbu a unu nọ n’ahụhụ.” 15 Ma ụmụ Izrel sịrị Jehova: “Anyị emehiewo.+ Mee anyị ihe dị gị mma.+ Ma, biko, napụta anyị taa.”+ 16 Ha wee malite iwepụ chi ndị mba ọzọ ndị dị n’etiti ha+ ma fewe Jehova,+ nke mere na nsogbu Izrel+ ekweghị mkpụrụ obi ya+ odidi. 17 Ka oge na-aga, a kpọkọtara ụmụ Amọn,+ ha wee maa ụlọikwuu ha na Gilied.+ Ụmụ Izrel wee zukọta maa ụlọikwuu ha na Mizpa.+ 18 Ndị Gilied na ndị isi Gilied wee malite ịsị ibe ha: “Ònye ga-edu anyị gaa buso ụmụ Amọn agha?+ Ya bụrụ onyeisi ndị niile bi na Gilied.”+
Ndị Ikpe 10